Fanambarana Nanaitra Tamin’ny Fanazavan’ny Filohan’i Trinidad & Tobago Momba Ilay Hofantrano Naha-be Adihevitra · Global Voices teny Malagasy
Fanambarana Nanaitra Tamin'ny Fanazavan'ny Filohan'i Trinidad & Tobago Momba Ilay Hofantrano Naha-be Adihevitra
Voadika ny 03 Janoary 2017 3:53 GMT
Rhoda Bharath, mampiseho amin'ireo mpiserasera ny angon-tahirin-kevitra mikasika ilay lazaina ho fitondrantena ratsy imasom-bahoaka ataon'ny filohan'i Trinidad sy Tobago. Pikantsary nalaina tao amin'ny fampitàna mivantana tamin'ny Facebook-n'i Bharath ny 1 Janoary 2017.
Rhoda Bharath, mpampianatra amin'ny oniversite izay nanao ho asany manokana ny hahazoana ny fototr'ilay fahazoana hofantrano naha-be adihevitra nomena ny filoham-pirenena nanomboka ny taona 2017 tamin'ny fandefasana lahatsary mivantana tao amin'ny Facebook nampahafantatra ny mpiserasera ny zava-nisy farany amin'ny fivoaran-draharaha.
Raha maro ny lafin-javatra ao amin'ny tohankevitr'i Baraths toy ny antony tokony hanadihadiana ny filohan'i trinidad sy Tobago, Anthony Carmona, noho ilay lazaina fa tsy fanamendrehana, nohamafisiny ny momba ilay hofantrano satria inoany fa misy “anton-javatra lehibe” ao. Nandray 28 000 Dolara TT (eo ho eo amin'ny 4.180 Dolara Amerikana) isam-bolana i Carmona nanomboka tamin'ny Jolay 2013 hatramin'ny May 2015, nandritra ny nipetrahany tao amin'ny tranom-panjakana. Ny tahirin-kevitra rehetra momba izany dia milaza mazava tsara fa ny filoha dia mety hisitraka ny tombontsoan'ny tranom-panjakana, na vola mitovy amin'ny hofantrano mba hahafahany mipetraka amin'ny trano tsara — fa tsy izy roa.
Tamin'ny fijerena ireo antontan-taratasy, nanosoka hevitra ny mpisolovava iray monina any Angletera hoe manome toerana izany hanaovana famotorana mikasika heloka bevava momba ny fitondrantena ratsy imasom-bahoaka ataon'ny filoha, ny mpitantsorany tamin'izany fotoana izany ary ny lehiben'ny mpiandraikitra manokana, fa tsy mbola neken'ny polisy ny fangatahan'i Bharath fanadihadiana. In'efatra nandefa taratasy tamin'ny lehibe roa mpisolo toerana ao amin'ny polisy ny mpisolovavany, Justin Phelps, hatramin'ny nanaovan'i Bharath tafatafa tamin'ny mpanao gazety tamin'ny 27 Oktobra 2016.
Na izany aza, niha-natevina ny zava-manitikitika. Tamin'ny 28 Septambra 2016, nanambara am-pahibemaso ny Filoha Carmona fa nanakarama orinasa mpanara-maso mba hanao tatitra (ny vokatr'izany tatitra izany no toa manohana ny fanapahankevitra ny hanome azy ny hofantrano), fa ny SRC , Iraka Mpijery ny Karama, no nanome alalana ny fandoavana ny vola niainga avy amin'izany tatitra izany, ary io tatitra io mihitsy no natolotra ny Biraon'ny fanarahamaso ankapobeny.
Nanazava ny SRC fa “tsy tafiditra tao anatin'ilay lazaina fa fanapahankevitra” hanomezana hofantrano — toe-javatra izay mifanohitra amin'ny filazan'ny filoha hoe ny iloha sy ireo mpikambana ao amin'ny SRC, amin'ny alalan'ny lehiben'ny fitantanana ny mpiasa, no nanapaka hevitra fa noho ny “faharatsian'ny endriky” ny tranom-panjakana izay nomena azy, no anomezana azy ilay hofantrano.
Nanizingizina koa ny SRC fa mbola tsy nahita ilay tatitry ny mpanaramaso nolazaina fa nampanaovin'ny filoha. Raha ny marina, ao anatin'ny taratasy iray tamin'ny 9 Jolay 2013, nanaiky ny hofantrano 15,450 Dolara TT (manodidina ny 2,305 Dolara Amerikana) ny lehiben'ny mpiandraikitra ny mpiasa tamin'izany fotoana izany “mandritra ny fe-potoana izay ampiasan'[ny filoha] izany trano izany vonjimaika”, na dia “araka ny fitsipika, raha misy mpiasam-panjakana omen'ny fanjakana trano, dia tsy andoavana hofantrano izy mandritra ny fotoana isitrahany izany fampiantranoana izany.” Nitombo miandalana ho $ 28.000 isam-bolana io tarehimarika io tatỳ aoriana, fa tsy misy taratasy hatramin'izao manondro tatitra nataon'ny mpanaramaso tsy miankina.
Nilaza i Bharath fa nangataka ny dika mitovin'ilay tatitra tany amin'ny biraon'ny fanarahamaso ankapobeny izy, saingy nolazaina azy fa noho ilay fangatahany mifandray amin'ny filoha, ity birao ity dia tsy voatery hanaraka ny Fahalalahan'ny fangatahana Vaovao. Toe-javatra hafahafa izany, ary iray amin'ireo eritreretin'i Bharath ho maodely mampidi-doza. Raha omena andraikitra amin'ny fanarahana maso ny fandaniana amin'ny raharaham-bahoaka ilay birao, ny mpanadihady dia tendren'ny filoha.
Ho an'i Bharath, fanalahidin'ny olana ny fanarahana maso io tatitra io, araka ny filazany hoe ny votoatiny — sy ny fotoana namoahana azy — dia iankinan'ny ain-dehiben'ny firenena:
Inona no datin'ilay tatitra, satria raha nanome alalana ny [lehiben'ny mpiandraikitra ny mpiasa] tamin'ny 9 Jolay, vita taloha sa taorian'ny nahazoan'i [Carmona] ilay fanampiana ilay tatitra? Ary, hatreo amin'io dingana io, satria tsapako fa tsy afaka matoky anao aho, Andriamatoa Filoha, ohatrinona no sandan'izany tatitra izany ho anay? Inona avy ireo masontsivana ho an'izany?
Manamafy hatrany koa i Bharath fa hatramin'izao, tsy nisy na iray aza tamin'ireo manampahefana nanome izany hofantrano izany ka niresahany nahita io tatitra io, sy nanoratra izay mety ho dikan'izany ho an'ny olom-pirenena ao amin'ny firenena:
Izay nataon'ny filoha dia ny nijanonana tao amin'ny trano izay tsy zakan'ny fenitra misy azy ary naka ny vola ho any am-paosiny. Enina hetsy dolara, izay tsy nadoavana hetra ary nivantana tany anaty paosiny. Izany no endrika hadalàna mitranga eto amintsika eto.
Raha misy mpiandry vavahady vitsivitsy vonona hitazona ny filoha ho tomponandraikitra – ny mpitantana ny vola ao amin'ny Tranon'ny Filoha, ny mpanaramaso ankapobeny, ny polisy – izy rehetra ireo, araka ny hevitr'i Bharath, dia tsy miezaka ny hanao izany. Niantso ny haino aman-jery sy ny mpampiasa ny haino aman-jery sosialy izy mba hanamafy ny tsindry. Nanamarika ihany koa izy fa ny fiarahamonim-pirenena, ary na ny praiminisitry ny firenena, Dr. Keith Rowley aza, dia nangina, saingy nanaiky fa mety ho aloha loatra ny hanehoan'i Rowley hevitra momba izany mandra-panomboky ny polisy ny fanadihadiana:
Araka izany hanontany indray aho nahoana ny [lehiben'ny polisy] no tsy mamaly?
Tokony ho raisintsika matotra io, ry Trinidad sy Tobago — tsy afaka hamela ny fahanginana sy ny tsy firaharahiana hanindry antsika isika […]
Heveriko fa tena zava-dehibe raha mijanona ho tompon'andraikitra manoloana antsika [ny filoha] […] amin'ny maha-tompon'andraikitra ambony eto amin'ny tany […]
Tsy maintsy izingizinintsika ny hitazonana azy ho tomponandraikitra satria raha afaka miala maina amin'ny fakàna ny vola izay tsy azy izy, dia tsy manan-jo hanagadra ny olona izay manao izany heloka bevava izany koa isika.
Tsy nisy fanehoankevitra mismisy kokoa momba ilay olana intsony avy amin'ny Biraon'ny Filoha.